ဦးရာဇတ် Archives - Page4of5- News @ M-Media
အမည်မခံလိုသူ စာရေးဆရာကြီး သို့မဟုတ် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်
တင်နိုင်တိုး(weekly Eleven) ဆရာကြီးဦးရာဇတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေစဉ် ၁၉ ဇူလိုင် ၁၉၄၇ တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်အတူကျဆုံးခဲ့ရသော အာဇာ နည်ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ဆရာကြီးသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မြန်မာမှု ဓလေ့ထုံးစံ၊[Read More…]
July 17, 2012 — ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ, ဦးရာဇတ်, ဆောင်းပါး
သူ့စကားများက ညွှန်းဆိုနေသည့် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အကြောင်း
ကျော်မိုးအောင် ဆရာကြီးအကြောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ မနှစ်က ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နေ့ အခမ်းအနားအတွက် ပြင်ဆင်တုန်းက စုဆောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီး ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ——————————————————————- “We don’t regard[Read More…]
July 16, 2012 — ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ, ဦးရာဇတ်
အာဇာနည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်နေ့ ကျင်းပမည်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဦးရာဇတ်၏ ဇန္န၀ါရီလ (20) ရက်တွေ့တွင်ကျရောက်မည့် (၁၁၄) နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှစတင်၍ နှစ်စဉ် “ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နေ့” ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်Myanmar Muslim Education & Cultural Society မှ ကြီးမှူးလျက် ”Sayar Gyi U Razak’s[Read More…]
December 21, 2011 — သတင်းများ, ဦးရာဇတ်
မန္တလေး ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်
(၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉-ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရသည့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်သို့ ) (၁) Breathes be the man. With soul so dead. To never himself[Read More…]
July 15, 2011 — ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ, ဦးရာဇတ်